ह्यासट्याग अनुसन्धान र प्रोफाइल अनुकूलन सेवा
स्वचालित इन्स्टाग्राम अनुयायीहरू खरीद गर्नुहोस्
फेसबुक भिडियो दृश्यहरू खरीद गर्नुहोस्
फेसबुक अनुयायीहरू किन्नुहोस्
Facebook फ्यान पृष्ठ मनपर्नेहरू किन्नुहोस्
नि: शुल्क इन्स्टाग्राम अनुयायीहरू र मनपर्दो प्राप्त गर्ने सबैभन्दा स्मार्ट तरीका!
TurboMedia.io छिटो र सुरक्षित रूपमा उच्च-गुणको इन्स्टाग्राम अनुयायीहरू र मनपर्दो प्राप्त गर्न को लागी तपाइँको सजिलो र प्रभावी समाधान हो! उत्कृष्ट स्वतन्त्र र भुक्तान विकल्पहरू तपाईंको व्यक्तिगत विकास आवश्यकताहरू अनुरूप उपलब्ध छन्।
नि: शुल्क इन्स्टाग्राम अनुयायीहरू र मनपराउँनुहोस्
नि: शुल्क इन्स्टाग्राम अनुयायीहरू र मनपराउनेहरू पाउन सजिलो छ!
साधारण निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्
To० देखि seconds० सेकेन्डमा भयो!
किन TurboMedia.io प्रयोग गर्ने?
TurboMedia.io एक नवीन नेटवर्क प्रदान गर्दछ जुन तपाईंलाई छिटो र सजीलै प्राप्त गर्न अनुमति दिँदछ १० नि: शुल्क इन्स्टाग्राम अनुयायीहरू र १० निःशुल्क इन्स्टाग्राम मनपर्‍यो प्रत्येक hours 48 घण्टा! सशुल्क योजनाहरू उपलब्ध छन्, तर नि: शुल्क योजनाहरू अझै पनि तपाईंको प्रोफाइल बढाउनमा धेरै प्रभावी छन्। कुनै पासवर्डको आवाश्यक छैन, तपाइँको इंस्टाग्राम प्रोफाइल जानकारी सुरक्षित र सुरक्षित राख्दै।
TurboMedia.io मानव सम्भव भएसम्म सरल हुनको लागि डिजाइन गरिएको थियो! तपाईंको समय महत्त्वपूर्ण छ र हामी त्यो बुझ्छौं। नि: शुल्क अनुयायीहरू र मनपर्दो प्राप्त गर्न, एक सर्वेक्षण पूरा गर्नुहोस् वा to० देखि seconds० सेकेन्डमा social सामाजिक कार्यहरू र तपाईंले गर्नुभयो! तपाईंले लगभग सक्रिय तुरून्त गरेको सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ र तपाईंले प्रक्रिया530 घण्टामा दोहोर्याउन सक्नुहुन्छ।
जब तपाइँ नि: शुल्क वा भुक्तान योजना सक्रिय गर्नुहुन्छ, तपाइँ तपाइँका अनुयायीहरू र मनपर्दो तत्काल बढ्न सुरू गर्नुहुनेछ। म्यानुअल रूपमा प्रत्येक hours 48 घण्टामा नि: शुल्क योजना सक्रिय गर्नुहोस् वा १००% स्वचालित भुक्तान योजना सक्रिय गर्नुहोस्। एक सशुल्क योजना सक्रिय गर्नुहोस् र स्वचालित रूपमा प्रत्येक हप्ता अनुयायीहरू प्राप्त गर्नुहोस् र तपाईंले नयाँ मिनेटमा बनाउनुहुने प्रत्येक नयाँ पोष्टमा मनपर्दछ!
नि: शुल्क र भुक्तान विकल्पहरू
१०० अनुयायीहरू ($ २०) १०० अनुयायीहरू ($ २०) १०० अनुयायीहरू ($ २०)
प्रति दिन १ Follow जना अनुयायीहरू प्राप्त गर्नुहोस्
हरेक H 48 घण्टामा छुटकारा दिन्छ
तपाई १x प्रत्येक 1 48 घण्टामा सक्रिय गर्नुहुन्छ
१०० मनपर्‍यो (। १..25०) १०० मनपर्‍यो (। १..50०) १०० मनपर्‍यो (। १..100०) १०० मनपर्‍यो (। १..200०) १०० मनपर्‍यो (। १..500०) १०० मनपर्‍यो (। १..1000०)
प्रति पोष्ट २ikes मनपर्‍यो
नि: शुल्क इन्स्टाग्राम अनुयायीहरू पाउनुहोस्: तपाईंको लागि के प्रस्ताव छ जान्नुहोस्
जनवरी २०२० मा, इन्स्टाग्रामले लगभग एक अरब मासिक प्रयोगकर्ताहरूको रिपोर्ट गर्‍यो। जनवरी २०२१ आउनुहोस्, त्यो संख्या धेरै निशानहरू सम्म जान बाध्य छ र इन्स्टाग्राम प्रयोगकर्ताहरूको यो द्रुत बृद्धि केवल प्लेटफर्म कति टाढा आएको छ भनेर देखाउन जान्छ। आज, इन्स्टाग्राम व्यवसाय र सोशल मिडिया प्रभावकर्ताहरूको लागि पैसा कमाउने मेसिन हो, त्यसैले यो सामाजिक मिडिया प्लेटफर्मको भन्दा धेरै हो। अर्कोतर्फ, यो व्यावहारिक रूपमा धेरैको लागि क्यारियर हो। सबैभन्दा प्रभावशाली ब्रान्डहरू र सोशल मिडिया प्रभावकर्ताहरूले प्रति पोस्ट लाखौं बनाउँदैछन्, त्यसोभए तपाईं किन पछाडि जानुहुन्छ? तपाईंले इन्स्टाग्रामबाट केहि वास्तविक पैसा कमाउनु सुरु गर्नु अघि, तपाईंले प्लेटफर्ममा तपाईंको छवि खेती गर्न कडा परिश्रम गर्नुपर्नेछ। त्यहाँ केहि कारकहरू छन् कि कसरी इन्स्टाग्राम मार्फत तपाईले कति चाँडो र कति पैसा कमाउनुहुन्छ भनेर हुकुम गर्दछ। यसमा तपाईं को हुन्, तपाईंको ब्रान्डको लागि मानहरू, तपाईं के प्रस्ताव गर्नुहुन्छ, र कति व्यक्तिले तपाईंलाई विश्वास गर्छन् र समाधानको लागि तपाईं समातछन्। तपाईंको ब्रान्डको पहिचान स्थापना र उत्पादनहरू र / वा सेवाहरूको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु तपाईंको प्रमुख दायित्व हो। तर, त्यहाँ तपाईका अनुयायीहरूको संख्या द्रुत रूपमा बढाउने तरिकाहरू छन्। नि: शुल्क इन्स्टाग्राम अनुयायीहरू र भुक्तानी विकल्पहरू प्राप्त गर्न विकल्पहरूले तपाईंलाई तपाईंको प्रतिस्पर्धीहरूमाथि बढा दिन्छ। यो विशेष गरी तपाईंको लक्षित श्रोताको लागि पुग्ने र स्थायी प्रभाव पार्ने सन्दर्भमा हो। यस पोष्टमा, हामी नजिकबाट हेर्नेछौं कसरी अधिक ईन्स्टा अनुयायीहरू तपाईंको लागि चमत्कारहरू गर्न सक्छन्। त्यसो भए, थप कुनै विज्ञापन बिना, हामी यसमा प्रवेश गरौं!
इन्स्टाग्राममा अधिक अनुयायीहरू भएको फाइदाहरू
इन्स्टाग्राममा, प्रयास भनेको साधन हो र पैसा अन्त हो। जहाँसम्म, तपाईं त्यहाँ मात्र पाउनुहुनेछ जब तपाईंसँग बढि इन्स्टाग्राम अनुयायीहरू छन्। यहाँ केहि आश्चर्यजनक लाभहरू छन् जुन तपाईले देख्न सुरु गर्नु भएको छ एक पटक तपाईको अनुयायीहरूको संख्या निरन्तर बढ्दै गयो।
तपाइँको उत्पादनको लागि थप लिनेहरू: तपाइँले के प्रस्ताव गर्नु भएको छ तपाइँको लक्षित दर्शकहरु माझ धेरै मानिसहरू मा नपुगेसम्म धेरै बज उत्पन्न गर्दैन। थप अनुयायीहरूको साथमा, तपाईंसँग लगातार, बढ्दो स्ट्रिम हुने व्यक्तिहरू हुनेछन् जसले तपाईंको सामग्री साझा मात्र गर्दैनन् तर तपाईंका उत्पादनहरू पनि किन्नुहुनेछ। केहि सबैभन्दा लाभदायक इन्स्टाग्राम निचहरूमा यात्रा र पर्यटन, सौन्दर्य, स्वास्थ्य र फिटनेस, फेसन, अभिभावकत्व, जीवनशैली, व्यवसाय, खाना, फोटोग्राफी, र संगीत समावेश छ। उदाहरणका लागि जेन सेल्टर लिनुहोस्। 12 मिलियन भन्दा बढी इन्स्टाग्राम फलोअर्सको साथ, फिटनेस मोडेल व्यायाम, स्वास्थ्य र समग्र कल्याणलाई बढावा दिनको लागि इन्स्टाग्राममा एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व भएको छ। जेन कसैको उत्तम उदाहरण हो जो केहि बारे भावुक छ (उनको मामला मा, फिटनेस)। उनले आफ्नो समयलाई विश्वभरका समान विचारधारा भएका व्यक्तिहरूसँग साझा गर्न प्रयोग गरिरहेकी छिन्। यो कल्पना गर्न गाह्रो छ कि Instagram को सबैभन्दा प्रसिद्ध फिटनेस मोडेलहरू मध्ये एक एक पटक लुक्समा आधारित थियो। आज, सेल्टरले उनको सशुल्क फिटनेस कार्यक्रमहरू र Instagram मार्फत पनि राम्रो कमाई गर्छिन्, जहाँ उनले प्रत्येक दिन बित्दै जाँदा आफ्ना अनुयायीहरूलाई थप गरिरहेकी छिन्।
तपाईंले इन्स्टाको अन्वेषण पृष्ठमा फिचर गर्न सक्नुहुन्छ: जब तपाईं आफ्नो स्थानमा आफ्नो लागि नाम बनाउनुहुन्छ र सभ्य-पर्याप्त फलोअरहरू हुनुहुन्छ, तपाईंको पोस्ट इन्स्टाग्रामको अन्वेषण पृष्ठमा देखा पर्न सक्छ। हामीले 'सभ्य-पर्याप्त' शब्द प्रयोग गर्दैछौं किनभने त्यहाँ कुनै कडा-र-छिटो नियम छैन कि तपाईंले इन्स्टाग्राम एक्सप्लोरमा कति जना अनुयायीहरू देखाउनुपर्दछ। इन्स्टाग्रामको एक्सप्लोर पृष्ठ मे २०१९ मा फेरि हेरफेर गरिएको थियो र अब, यसमा नेभिगेसन पट्टी छ जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूले हेर्न चाहेको सामग्री छनौट गर्न अनुमति दिन्छ। विकल्पहरूमा IGTV समावेश छ, जुन लामो-फार्म भिडियोहरू (एक मिनेट-प्लस भिडियोहरू) हेर्नको लागि इन्स्टाको आफ्नै प्लेटफर्म हो, र शप - इन्स्टाग्राम किनमेल प्लेटफर्म। IGTV र शपको साथसाथै, प्रयोगकर्ताहरूले सामग्री हेर्नको लागि विषय च्यानलहरू पनि छनौट गर्न सक्छन्। niches मा तिनीहरूले चासो राख्छन्। उदाहरण को लागी, यदि तपाईको Instagram खाता सबै खाना को बारे मा हो भने, तपाई खाना सम्बन्धी सामग्री खोज्ने प्रयोगकर्ताको अन्वेषण पृष्ठमा चित्रित हुन सक्नुहुन्छ। इन्स्टाग्राम एक्सप्लोरमा चित्रित हुनुले तपाइँको च्यानललाई तपाइँको अस्तित्व र तपाइँले के प्रस्ताव गर्नु पर्छ भन्ने थाहा नभएका प्रयोगकर्ताहरूसँग जोड्न सक्छ। इन्स्टाग्रामले अब ब्रान्डहरूलाई अन्वेषणमा विज्ञापनहरू खरिद गर्न अनुमति दिन्छ। जब खरिद गरिएका विज्ञापनहरू अन्वेषण फिडमा नै प्रदर्शित हुँदैनन्, तिनीहरूले तपाईंको ब्रान्ड पत्ता लाग्ने सम्भावनाहरू बढाउन सक्छन्।
वेबसाइट ट्राफिक बढाउनुहोस्: यदि तपाइँको ब्रान्ड मुख्यतया यसको आधिकारिक वेबसाइटबाट काम गर्दछ भने, तपाइँ तपाइँको वेबसाइट मार्केट गर्न को लागी एक प्लेटफर्म को रूप मा Instagram को उपयोग गर्न आवश्यक छ। तपाईंले इन्टरनेटमा धेरै ब्लगहरू र लेखहरू फेला पार्नुहुनेछ जुन केही सजिलो कदमहरू चाल्न सिफारिस गर्दछ। यसमा तपाईंको इन्स्टाग्राम बायोमा र तपाईंको पोस्ट गरिएका सबै छविहरू र भिडियोहरूमा तपाईंको व्यापार वेबसाइटमा लिङ्क थप्ने समावेश छ। जे होस्, तपाईंसँग पर्याप्त फलोअरहरू नभएसम्म, तपाईंले इन्स्टाग्रामलाई तपाईंको लक्षित दर्शकहरूसँग आफ्नो वेबसाइट जडान गर्ने प्लेटफर्म हुने अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्न। यदि तपाईं नियमित रूपमा इन्स्टाग्राममा उच्च-गुणस्तरको सामग्री पोस्ट गर्दा पनि नयाँ अनुयायीहरू प्राप्त गर्न संघर्ष गर्दै हुनुहुन्छ भने, यो समय हो। एउटा सेवाको लागि साइन अप गर्न जसले तपाईंलाई नि: शुल्क इन्स्टाग्राम अनुयायीहरू प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईंका अनुयायीहरूको संख्या बढ्दै जाँदा, तपाईंको ब्रान्डको आधिकारिक वेबसाइटमा आगन्तुकहरूको संख्या बढ्दै जान्छ। वेबसाइटको ट्राफिक बढ्दा मानिसहरूले तपाईंले बिक्री गरिरहनुभएको कुरा किन्नेछन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन, यसले तपाईंको वेबसाइटलाई केही अत्यावश्यक दृश्यता दिनेछ। यदि तपाइँ तपाइँको वेबसाइट खोज-इन्जिन अनुकूलित छ भनेर सुनिश्चित गर्न को लागी सही कुञ्जी शब्दहरू समावेश गरी पर्याप्त प्रयास गर्नुहुन्छ भने, संयुक्त परिणामहरू सकारात्मक हुन सक्छ। तपाईंको वेबसाइटको खोज इन्जिन रैंकिंग सुधार हुनेछ, तपाईंको ब्रान्ड इन्स्टाग्राममा मात्र नभई Google, Yahoo, र Bing जस्ता प्लेटफर्महरूमा पनि थप दृश्यात्मक बनाउँछ।
YouTube मा थप ध्यान दिनुहोस्: YouTube संसारको सबैभन्दा ठूलो भिडियो-आधारित सामाजिक मिडिया प्लेटफर्म हो र यदि तपाइँ एक महत्वाकांक्षी YouTuber हुनुहुन्छ भने, तपाइँ YouTube मा मात्र आफ्नो काम गर्न सक्नुहुन्न। इन्स्टाग्राम प्रोफाइल पनि कायम राख्नुहोस् र यसलाई सक्रिय रूपमा प्रयोग गर्न सम्झनुहोस्। जसरी तपाइँ वेबसाइटको लागि गर्नुहुन्छ, तपाइँको इन्स्टा बायोमा तपाइँको YouTube च्यानलको लिङ्क टाँस्नुहोस् र तपाइँको हालै पोस्ट गरिएको YouTube भिडियोको लिङ्क अपडेट गरिरहनुहोस्। YouTube र Instagram मा तपाइँको संयुक्त फलोअरहरू र सदस्यहरू मध्ये, त्यहाँ धेरै हुन सक्छन् जो तपाईंलाई इन्स्टाग्राममा परिचय गराइयो। तपाईंको इन्स्टाग्राम बायोमा तपाईंको YouTube भिडियोहरू र च्यानलको विवरणहरू समावेश गर्नाले अवस्थित इन्स्टाग्राम अनुयायीहरूलाई तपाईंको YouTube च्यानलमा जान प्रोत्साहित गर्नेछ। यदि उनीहरूलाई उनीहरूले देखेका कुराहरू मन पराउँछन् भने, तपाइँसँग YouTube मा धेरै सदस्यहरू र हेराइहरू हुनेछन्, जसले नाटकीय रूपमा तपाइँको पूर्ण-समय YouTuber बन्ने मौकाहरू बढाउनेछ। यदि तपाइँ दुबै प्लेटफर्महरूमा सक्रिय हुन सक्नुहुन्छ भने, यसले अझ बढी पुरस्कारहरू दिनेछ। YouTube र Instagram दुवैबाट स्वस्थ पैसा कमाउने कल्पना गर्नुहोस्। निमन्त्रणा सुनिन्छ, हैन?
अन्य ब्रान्डहरूसँग सहकार्य गर्नुहोस् र पुरस्कारहरू कटनी गर्नुहोस्: जब तपाईं इन्स्टाग्राममा दृश्यता प्राप्त गर्न थाल्नुहुन्छ, अन्य ब्रान्डहरू र तपाईंको स्थानमा काम गर्ने सामग्री-सिर्जनाकर्ताहरूले तपाईंसँग सहकार्य गर्न चाहन्छन्। आजकल, यो सहकार्य को बारे मा अधिक छ र सामाजिक मिडिया मा प्रतिस्पर्धा को बारे मा कम, र यो काम गर्दछ। दुई व्यवसाय/व्यक्तिले सँगै काम गर्न र एकअर्काको उपलब्धि र सफलताहरूलाई खुवाउन सक्ने अवस्थामा अरूलाई तल राखेर के फाइदा हुन्छ? हामीले यात्रा भ्लगरहरूले सहयात्री भ्लगरहरू, साथै सङ्गीतकारहरू, र कलाकारहरूसँग सहकार्य गरेको देख्छौं। यसमा कुनै शंका छैन कि इन्स्टाग्रामले अवसरहरूको धेरै ढोका खोलेको छ। तपाईंले आफ्नो खेल बढाउनु पर्छ र तपाईंको लक्षित दर्शकहरूको ध्यान खिच्ने सामग्री राख्नमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। एकपटक तपाईंसँग अनुयायीहरूको उचित संख्या भएपछि, तपाईंले सहयोगका लागि अन्य ब्रान्डहरूसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंका सबै सहयोग अनुरोधहरू स्वीकार गरिने छैन, केहीले जानेछन् र यदि राम्रोसँग तानिएमा, तिनीहरूले तपाईंको अनुयायीहरूको सङ्ख्या उच्च गर्न सक्छन्। जब तपाईं 'सामाजिक मिडिया प्रभावकर्ता' स्तरमा पुग्नुहुन्छ, तपाईंले अन्य ब्रान्डहरू र सामग्री सिर्जनाकर्ताहरूबाट सहयोग अनुरोधहरू अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्छ, र चक्र जारी रहनेछ। एक प्रभावकारीको रूपमा, तपाईंसँग अन्य निचहरूका ब्रान्डहरूसँग सहकार्य गर्ने शक्ति पनि हुनेछ जसले उत्पादनहरू प्रस्ताव गर्दछ। तपाइँको आला को पूरक हो। उदाहरणका लागि, यदि तपाईं संगीतकार हुनुहुन्छ र Instagram मा 'प्रभावकर्ता' स्थिति प्राप्त गर्न व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले खेल्ने उत्पादनहरू निर्माण र बिक्री गर्ने ब्रान्डहरूमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। गिटार प्लेयरले गिटार र/वा एम्पलीफायर-निर्मातासँग सहकार्य गर्न सक्छ, एक गायकले माइक्रोफोन-उत्पादक कम्पनीसँग सहकार्य गर्न सक्छ, र यस्तै अन्य।
तपाईंको ब्रान्ड प्रचार गर्नको लागि इन्स्टाग्राम सुविधाहरू
एकचोटि तपाईंको इन्स्टाग्राम पेज याद गर्न थाल्छ र तपाईं अधिक फलोअरहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ, तपाईं इन्स्टाग्रामको अनौंठो मार्केटिंग सुविधाहरूको फाइदा लिन सक्नुहुनेछ अझ बढि इन्स्टाग्राम अनुयायीहरू फेला पार्न। यी सबै सुविधाहरू प्रयोग गर्दा अनिवार्य छैन, मिक्स र मिलान गर्न स्वतन्त्र महसुस। यस तरीकाले, तपाईं आफ्नो ब्रान्डको पहुँच अधिकतम बनाउन इन्स्टा भित्र निर्मित उपकरणहरूको अधिकतम बनाउन सक्नुहुन्छ। नियमित तस्बिर साझेदारी सुविधाहरू बाहेक, इन्स्टाग्रामले निम्न मार्केटिंग सुविधाहरूमा गर्व गर्दछ।
हामीले IGTV अघि छलफल गर्‍यौं, तर त्यो मात्र लामो-फारम भिडियो प्लेटफर्म हो। पूर्वनिर्धारित इन्स्टाग्राम अनुप्रयोगले मात्र छोटो-फर्म भिडियो पोष्टहरूको लागि अनुमति दिन्छ। सामान्य छोटो-फारम भिडियो अपलोड सुविधा बाहेक, प्लेटफर्मले प्रस्ताव गरेको दुई अन्य भिडियो सुविधाहरूमा प्रत्यक्ष भिडियोहरू र कथाहरू समावेश छन्। प्रत्यक्ष भिडियो सुविधाले ब्रान्डहरूलाई ब्रान्ड प्रामाणिकता र पारदर्शिता निर्माण गर्न अनुमति दिन्छ - ती चीजहरू जुन प्रत्येक बित्दै जाने दिनको साथ बढि मूल्यवान हुँदै जान्छ। यो आलामा लगातार बढ्दो प्रतिस्पर्धाको कारण हो। यो तपाईका अनुयायीहरूका लागि वास्तविक समयमा अन्तर्क्रिया गर्नका लागि एक उत्तम तरिका हो। प्रत्येक पटक जब तपाईं एक प्रत्यक्ष भिडियो स्ट्रिमिंग शुरू गर्नुहुन्छ, तपाईका अनुयायीहरूलाई सूचित गरिन्छ। प्लेटफर्मले हालसालै यसको प्रत्यक्ष भिडियो क्षमताहरू अपग्रेड गरेको छ र अब दुई प्रयोगकर्ताहरू दुई अलग उपकरणहरूबाट प्रत्यक्ष भिडियोमा सुविधा दिन सक्दछन्। प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ताबाट प्रत्यक्ष उत्पादनको लागि वास्तविक-समयको सहकार्यको लागि सम्भावनाहरू अनन्त छन्। यदि इन्स्टाग्रामको एल्गोरिथ्म तपाईंलाई अनुकूल छ भने, तपाईंको प्रत्यक्ष भिडियोले यसलाई इन्स्टाग्राम अन्वेषण पृष्ठमा "शीर्ष लाइभ" भिडियोमा पनि पुर्‍याउन सक्छ। यदि यो गर्छ भने, तपाईंको भिडियो ईन्स्टा प्रयोगकर्ताहरू मार्फत विश्वभरि हेराईनेछ, बढ्दो अनुयायीहरूको गन्तीको संभावनालाई सुधार गरी। त्यहाँ 'कथाहरू' सुविधा पनि छ जुन १० सेकेन्ड छवि अवलोकन र १--सेकेन्डको भिडियो दृश्यलाई अनुमति दिन्छ। यो एक निफ्टी सुविधा हो जुन ब्रान्ड र प्रभावकर्ताहरूले उनीहरूका पछिल्ला उत्पादनहरू, सेवाहरू, र / वा पोष्ट गरिएको सामग्रीको बारेमा उनीहरूका अनुयायीहरूलाई अपडेट गर्न भारी प्रयोग गरी आएका छन्। इन्स्टाग्रामले 'कथाहरू' सुविधा भित्र पनि उत्पाद-ट्यागि enabled सक्षम गरेको छ, जसको मतलब यदि तपाईं यदि कुनै उत्पादन प्रदर्शन गर्दै हुनुहुन्छ जुन तपाईं 'कुनै कथाहरू' मध्ये एकमा बेच्दै हुनुहुन्छ, तपाईं यसलाई ट्याग गर्न सक्नुहुनेछ। अनुयायीहरू जो यसलाई खरीद गर्न इच्छुक छन् उत्पादन ट्यागमा क्लिक गर्न सक्दछन् र यसलाई तपाइँको वेबसाइटबाट खरीद गर्न सक्दछन्।
तस्विर र भिडियो साझेदारीको अलावा, तपाइँले इन्स्टाग्राममा के प्रस्ताव गर्नुपर्दछ प्रचार गर्न विज्ञापन पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ धेरै सेटिंग्स छन् जुन तपाईसँग प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको ब्रान्डको लागि चलाउने सही प्रकारका विज्ञापनहरू फेला पार्न। तपाईं आफ्नो पृष्ठमा अवस्थित सामग्री प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र उनीहरूलाई इन्स्टाग्राम विज्ञापन सुविधाको साथ विज्ञापनमा रूपान्तरण गर्न सक्नुहुनेछ। इन्स्टाग्राममा विज्ञापनहरू सिर्जना र व्यवस्थापन गर्न, तपाईंले फेसबुकको विज्ञापन प्रबन्धक प्रयोग गर्नुपर्नेछ किनकि इन्स्टाग्राम एक फेसबुक स्वामित्वको अनुप्रयोग हो।
इन्स्टाग्राम प्रयोगकर्ताहरूले पुश सूचनाहरू सक्षम गर्न सक्दछन्, जसले तिनीहरूलाई सूचित गर्दछ जब उनीहरूले अनुसरण गर्ने पृष्ठहरूले नयाँ फोटोहरू, भिडियोहरू, इत्यादि अपलोड गर्दछन्। तपाईंको सबै पोष्टहरूमा, कल-टु-एक्शन समावेश गर्नुहोस्, तपाईंको फलोअरहरूलाई तपाईंको च्यानलको लागि पुश सूचनाहरू सक्षम पार्न भन्दै। जबकि तपाईका सबै अनुयायीहरूले तपाईको कलमा प्रतिक्रिया दिदैन, केहि ले दिनेछ। यदि उनीहरूले तपाईले पोस्ट गर्नु भएको कुरालाई मनपर्दछ भने, उनीहरू आफ्ना साथीहरू र अनुयायीहरूसँग साझा गर्छन्। इन्स्टाग्राममा अधिक दृश्यता प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा पुश सूचनाहरू तपाईंको बेस्ट शर्त नहुन सक्छ, तर यो राम्रो सहयोगको हुन सक्छ। निष्कर्ष त्यसोभए, अब तपाईंलाई थाहा छ कसरी अधिक इन्स्टाग्राम अनुयायीहरूले तपाईंलाई र ईन्टाको सबैभन्दा शक्तिशाली मार्केटिंग सुविधाहरूमा फाइदा लिन सक्दछन्। अर्को, तपाईले निर्णय गर्नुपर्छ कि कसरी तपाई बढि फलोअरहरू प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ। हो, सबै तरिकाले, तपाईं जैविक मार्ग लिन सक्नुहुन्छ र मान्छे तपाईंको सामग्रीसँग व्यस्त हुनको लागि 'फलो' बटनमा हिर्काउनु अघि पर्ख्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि यो समय खपत हुने छ र यदि तपाईं इन्स्टाग्राम सफलताको उचाइ मापन गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाई वैकल्पिक मार्ग छनौट गर्न राम्रो हुनुहुनेछ। इन्स्टाग्राम दृश्यता द्रुत रूपमा बृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरूको लागि साइन अप गरेर, तपाईं निःशुल्क इन्स्टाग्राम अनुयायीहरू र छिटो मनपर्दो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमहरूले प्रस्तावमा संस्करणहरू पनि तिर्ने गरेका छन्। जबकि भुक्तान गरिएको ले तपाईको परिणाम लाई छिटो लेराउँदछ, तपाई स्वतन्त्र संस्करणको प्रयोग गरेर धेरै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्ता कार्यक्रमहरूको बारेमा राम्रो कुरा के हो भने त्यहाँ कुनै बोटहरू सामेल हुँदैनन्। त्यसो भए, तपाईंले प्राप्त गर्नुभएको सबै नयाँ अनुयायीहरू वास्तविक इन्स्टाग्राम प्रयोगकर्ताहरू हुन्। त्यसोभए किन त्यस्तो कार्यक्रमको लागि साइन अप नगर्ने र तपाइँको ब्रान्डलाई अनलाइनमा प्रभावभन्दा पहिलेको प्रभाव ल्याउन दिनुहोस्?
गर्वका साथ 500,000+ इन्स्टाग्राम प्रयोगकर्ताहरू सेवा गर्दै
टर्बोमिडिया उपयोगकर्ता समीक्षा र तिनीहरूको अनुभव जाँच गर्नुहोस्
टर्बोमिडियाले हाम्रो इन्स्टाग्राम पृष्ठ कसैको भन्दा छिटो सुरू गर्नुभयो!
तिनीहरूले अनलाइन उच्च गुणवत्ता सेवाहरू प्रदान गर्दछ।
मैले २ बर्षदेखि टर्बोमिडिया प्रयोग गरिरहेको छु र मैले तिर्ने भन्दा बढि बृद्धि भयो! धन्यवाद साथीहरु।
इन्स्टाग्राम कथाहरू र रिलहरूको लागि टिकटक भिडियोहरू प्रयोग गर्दै: यो कसरी गर्ने
TikTok लाई आज विश्वको सबैभन्दा प्रसिद्ध छोटो भिडियो एप मध्ये एक मानिन्छ। भिडियो सेयरिङ एप कथित रूपमा प्रयोग गरिएको छ ...
3rd मई 2022
तपाइँको "फलो गर्ने" सूचीलाई किन काट्नुले तपाइँलाई थप अनुयायीहरू आकर्षित गर्न मद्दत गर्दछ?
यदि यो काउन्टरइन्ट्युटिभ जस्तो लागे पनि, तपाईले इन्स्टाग्राममा अनफलो गरेर धेरै इन्स्टाग्राम अनुयायीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ जससँग तपाई अब अन्तर्क्रिया गर्नुहुन्न। अन्तरक्रियाद्वारा, हामी...
21st अप्रिल 2022
२०२२ मा तपाईंको इन्स्टाग्राम मार्केटिङको लागि प्रयोग गर्नका लागि उत्तम फोटो फिल्टरहरू
इन्स्टाग्राम अब सरल फोटो-साझेदारी एप छैन जुन यो पहिले थियो। विश्वभरि यसको अत्याधिक लोकप्रियताले यसलाई बेजोड बनाइदिएको छ ...
के तपाइँ भाइरल प्रभावको लागि तयार हुनुहुन्छ?
टर्बोमिडिया व्यापार र व्यक्तिगत इन्स्टाग्राम खाताहरूको लागि अग्रणी सोशल मिडिया मार्केटिंग समाधान हो। हामी हाम्रो क्लाइन्टहरूलाई अधिक अनुसरणकर्ता, मनपर्ने, हेराईहरू र टिप्पणीहरू उनीहरूको प्रभाव अनलाइन बढाउन मद्दत गर्दछौं।
प्रतिलिपि अधिकार © २०२० टर्बोमेडिया (टर्बोमेडिया.आईओ)। सर्वाधिकार सुरक्षित। साइटमैप
सामाजिक कारणहरू समर्थन गर्न इन्स्टाग्राम कसरी प्रयोग गर्ने
कसरी एक सान्दर्भिक प्रभावकारी हुनुले तपाईंलाई आफ्नो इन्स्टाग्राम खाता बढाउन मद्दत गर्न सक्छ
प्रतिलिपि अधिकार © २०२० टर्बोमेडिया (टर्बोमेडिया.आईओ)।
यस वेबसाइटले तपाइँको वेबसाइटको सबै भन्दा राम्रो अनुभव प्राप्त गर्नका लागि कुकीहरू प्रयोग गर्दछ